"आम्दानी, स्वस्थ खानेकुरा र व्यायाम हुने भएकाले कृषि रोजेँ" – ज्ञानुमाया तामाङ | दर्पण दैनिक
"आम्दानी, स्वस्थ खानेकुरा र व्यायाम हुने भएकाले कृषि रोजेँ" – ज्ञानुमाया तामाङ
प्रकाशित मिति: २०७६ फाल्गुन २९ गते ०२:५६
२०४३ साल चैत ३ गते पिता रामबहादुर तामाङ र माता बुद्धिकुमारी तामाङको कोखबाट रसुवा नौकुण्ड सरमथली गाउँमा जन्मिएकी ज्ञानुमाया तामाङले २०५९ सालमा गौतम बुद्ध निमावि बाट एसएलसी पास गरेकी थिईन । बुबाको समाजसेवा बाट प्रेरित भएकी तामाङ १७ वर्षमा विवाह भए पनि आफनो सुन्दर समाज निमार्णमा लागिरहिन । समाजका केहि व्यक्तिले विरोध गरे पनि आत्माविश्वासका साथ टोल सुधार समितिकी अध्यक्ष भएर विकास योजनाका काम गरिरहिन । समाज परिवर्तन गर्न आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दै लागिरहेकी उनै सङघर्षशील महिला अहिले समृद्ध कृषि तथा पशुपालन फार्म दर्ता गरि कृषि पेशामा लागेकी छन । कृषि पेशा र समाजसेवाको कामबारे उनै विकासप्रेमी अगुवा महिला ज्ञानुमाया तामाङसँग दर्पण दैनिकको लागि रसुवाबाट संगीता लामाले गरेको प्रेरणादायी कुराकानीः
तपाई कृषि पेशामा कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
हामी किसानकै सन्तती हौं, जीवन खुसी राख्न कृषि पेसा गर्ने पर्छ । परम्परागत कृषि तथा पशुपालन त पुरानै पेशा हो । मुख्य पेशा कृषि नै बनाएर लाग्छु भनेर चाहिँ अरुले कृषि पशुपालन गरेको देखेर एकदमै रहर लागेपछि म पनि यसमा लागेँ । युटुब तिर भिडियो हेंरे, अहिले पनि हेर्छु त्यहाँ कृषि पेशाबाट धेरै आम्दानी गरेको देख्दा म पनि गर्छु, भन्ने लाग्यो । अनि इन्डियाबाट आएको बिषादियुक्त तरकारी खानुभन्दा यहाँ उत्पादन भएको अर्गानिक तरकारी खाएमा स्वस्थ रहने भएकोले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै यो पेशा सुरु गरेकी हुँ । कृषि पेशा गर्दा छोटो समयमै धेरै आम्दानि हुने भएकोले यो पेशा रोजें । म आफु मात्र लागेर भन्दा पनि म आम नारी रसुवाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरुमा कृषिमा लाग्न अनुरोध गर्दछु । कृषि गर्दा स्वस्थ खानेकुरा खान पनि पाईने खेतमा काम गर्दा व्यायाम पनि हुने ।
तपाइलाई कृषि पेशामा घर परिवारको सहयोग कस्तो छ ?
मेरो परिवारका सबैजना कृषि तथा पशुपालनमा खटिरहेका छौं । घर परिवारको साथ विना त मानिस अधुरै हुन्छ । कुनै क्षेत्रमा सफल बन्नलाई परिवारको माया तथा साथ जरुरी हुन्छ नै । हामी महिला भनेर पछाडि नपरौँ समाजको अन्य षुरुषहरुले महिलाले के गर्न सक्छ भनेर जिम्मेवारी दिदैन तर हामिले महिला महिला मिलेर गोरेटो बाटो पनि बनायौँ कुनै व्यक्तिले राम्रो काम गरेको छ, धेरैजनाले भनेर सल्लाह सुझाब पनि दिनु भयो । हामिले पनि मनमा दृढ विश्वास लिएर काम गरेका छौँ । आफ्नो गाउँ ठाउँ अवश्य सुन्दर बनाउ लागि परेका छौं । यो सब काम गर्न घरपरिवारले साँथ दिएको छ ।
कसको सहयोगमा फार्म सञ्चालन गर्नुभयो ?
कुनै पनि संघसंस्थाले सहयोग गरेको छैन । पहिला म आफनै लगानीबाट सुरु गर्छु भनेर लागेको हो मैले अहिले अनुदान लिएको पनि छैन । पहिला यहि ठाउँमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले फार्म सञ्चालन गरेको थियो । पछि छोडनु भएकोले यसैमा जग्गाको भाडा तिरेर मैले सञ्चालन गरेको हो । ५ महिना जति भयो सञ्चालन गरेको ।
कृषि अनुदान वितरणको अवस्था कस्तो छ, कृषक सम्म पुगेको छ ?
कतिपयले फर्म दर्ता गरे नि काम गरेको छैन, तर अनुदान भने लिएका छन । अव हाम्रो देशमा अनुदान भनेर माग्न आउनेलाई भन्दा पनि जसले कृषिमा काम गर्छ उसलाई चाहिं अनुदान दिने ब्यवस्था भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । आफुले काम गरेर देखाउनु पर्छ अनिमात्र अनुदान लिन सकिन्छ, तर यहाँ काम नगरिकनै पनि अनुदान लिनेहरुले गर्दा वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन जस्तो लाग्छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भने पनि कृषकहरुले आफनो जग्गालाई बाँझो राखी जङगल बनाएका छन् । मानिसहरु अल्छी भएका छन् । अव सवै मिलेर कृषिलाई जोड दिन लागौं र स्थानिय तहको पनि यसमा ध्यान जाओस, नेपालिहरु विदेश गएर धेरै दुःख गरेर बस्नु भएको छ, अव सरकारले युवालाई कृषि र पशुपालनमा लाग्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा परनिर्भरता कम गर्न सकिन्छ ।
उत्पादित बस्तुको बजार भाउ चित्त बुझ्दो छ त ?
कुखुराको मासुको मुल्य कहिले १७० हुन्छ, कहिले २७० हुन्छ । मुल्य भने घटबढ भईरहन्छ । कुखुराको मुल्य घटेसँगै दानाको मुल्य पनि घट्नु पर्यो, दानाको रेट सधै सगरमाथा जस्तै हुन्छ । कुखुराको मुल्य चाहिँ शुन्य हुन्छ, तरकारिको पनि भाउ कम छ त्यसैले सरकारले अब इन्डिया तिरको तरकारी नेपालमा भित्र्याउन दिनु भएन अनि नेपालको अर्गानिक तरकारीमा जोड दिएमा तरकारी पेशाबाट मुनाफा लिन सकिन्छ ।
स्थानिय तहबाट सञ्चालित कृषि कार्यक्रमहरु कस्तो पाउनु भएको छ ?
स्थानीय तहले ठुला ठुला कार्यक्रम ल्याएको छ । तर आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई कार्यक्रममा सहभागि गराउँदै आएको छ । अनुदान पनि नातेदारलाई बाँडेका छन् । स्थानीय तहले कुनै पनि सेवा प्रवाह गर्दा पार्टीगत नहोस अनि मात्र पो आफ्नो जनता अगाडि हुन्छन् । भोट भोलि त्यहि जनताको चाहिन्छ पार्टीगत नहेरी अनुदान दिने र जसले खेती गर्दैन उसलाई कर अनुदान माग्न आउँदा कारवाही गर्नुपर्छ अनि मात्रै युवाहरु कृषितिर लाग्छन् ।
सिचाईको सुविधा कस्तो छ ?
खानेपानिभनेर एउटा पाइप व्यक्तिगत ल्याएकी छु । त्यहि पानी सदुपयोग गरी तरकारीलाई पुर्याएकी छु । अहिले सम्म कुनै पनि संघ संस्थालाई मागेको छैन् । हाम्रो गाउँमा चाहिँ सिंचाईलाई भनेर कोहि कोहि व्यक्तिले पाइप ल्याएर घरमा थन्क्याएको भन्ने पनि सुन्छि । त्यस्ता अनुदान तथा सरकारी पैंशा खान पल्केकाहरुले खासमा भन्ने हो भने, कृषिको कुनै काम गरेका छैनन ।
अब स्थानीय तहले नागरिकको लागि के गर्नु पर्ला त ?
अब स्थानीय तहले हामि जस्तो महिला टिमलाई एकरुपता गरेर पार्टीगत नगईकन बराबर सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । जसले व्यवसाय गरेको छ उसलाई अनुदान दिएर अगाडि बढाउनु पर्छ । म जनप्रतिनिधिलाई के भन्न चाहान्छु भने तपाइले जनतालाई जसरी नि अगाडी बढाउनु पर्छ । अहिले जग बसालेमा भोलि हजुर हरुलाई सबैले भोट दिनुहुन्छ । त्यसकारण आम नागरिकको मनमा बस्ने काम गर्नुस । अर्को कुरा म समाजमा राम्रो काम गर्छु भनेर मैले पनि गुम्बा बनाउन लागेकी छु । मेरो व्यक्तिगत पैसा ९ लाख गएको छ । धर्मको लागि ऋण तथा दुख गरी भए पनि निर्माण पुरा गरेरै छाड्छु ।
२०७७ असार २३ गते ०५:३२
काठमाडौं । अनुकुल वातावरण नभएपछि नेपाल आएका सलह हराउँदै गएका छन्। मौसम अनुकुल नहुँदा सलह आफैं मर्न थालेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईंले जानकारी दिए। ‘तराईबाट प्रवेश गरेको सलह हावाको वेगअनुसार उत्तर, पश्चिमतिर लागेका थिए,’ उनले भने, ‘चिसोका कारण सलह आफैं मर्न थालेको जिल्लाका प्राविधिक रूपले बताएका छन्।’ उनकाअनुसार २२ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रममा सलह बाच्न सक्दैन। बाग्लुङ, रूकुमपूर्व तथा कालिकोटतिर ठूलो संख्यामा सलह मरेको जानकारी आएको उनले बताए।
भारत निकासी रोकिएको चिया निकासी हुन थाल्याे
२०७७ असार २३ गते ०७:३५
इलाम । चिया उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र रहेको सूर्योदय नगरपालिकाले चियाका लागि छुट्टै शाखा स्थापना गरेको छ । पछिल्लो चियामा समस्या चुलिँदै जाँदा त्यसको समाधानका निम्ति नगरपालिकाले सचिवालय गठन गरेर शाखा स्थापना गरेको हो । चिया किसान, उद्योगी र बजारको आ–आफ्नै समस्या झेल्दै आएको चिया क्षेत्रले चिया शाखा र सचिवालय पाएसँगै चियाको समस्या हल हुने अपेक्षा लिइएको छ । नगरपालिकाका आर्थिक समिति संयोजक देवेन्द्र शर्मा आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सचिवालयमा किसानका प्रतिनिधि, चिया उद्योगीका प्रतिनिधि, चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रतिनिधि र नगरपालिकाका उद्योग अधिकृत सदस्य सचिव छन् ।